Otomatiki kurongedza muchina vatengesi uye fekitori - China otomatiki kurongedza muchina Vagadziri
Bt-260 otomatiki Cellophane Kuputira Muchina
BT-260 Cigarette Bhokisi Rakazvimiririra 3D Cellophane Kuputira Muchina Zvimiro: Mushini wakagadzirwa padanho rekutora uye kugaya zvekunze zvigadzirwa zvemberi, uchishandisa inounzwa kunze kwedhijitari kuratidza transducer uye elec zvinhu, yakagadzikana uye yakavimbika mukushanda, yakasimba kubira, inotsvedza yakanaka. Inogona kuita otomatiki kurongedza, kufudza, kupeta, kupisa-kuvhara, kuverenga uye otomatiki anonamira misodzi tepi. Kurongedza kumhanya kunogona kugadziriswa zvisina nhanho. Kuchinja zvikamu zvishoma kunogona kuputira zvakasiyana ...
Kofi capsule dolce gusto nespresso katoni muchina wetsiva muchina
HAPANA 1. Muchina Nhanganyaya Muchina uyu firimu redu rakakungurutswa + pepa firimu linear modhi, inokurumidza uye yakagadzikana, inogona kuzadza 3000-3600 capsules paawa, inogona kuzadza mhando dzakasiyana dzemikombe, servo-inodzorwa inonaya canning, canning kurongeka inogona kusvika ± 0.3 g. Iine nitrogen yekuzadza basa, kuti iyo yakasara okisijeni yechigadzirwa ikwanise kusvika pa5%, inogona kuwedzera sherefu hupenyu hwekofi. Iyo yese muchina system yakavakirwa paSchneider uye yakagadzirwa neIoT tekinoroji, ine sarudzo yekombuta / nhare mbozha, ...
Otomatiki nyoro ndokupisika dzaFord
Z80-5 otomatiki Mucheche Wet Tissue Kugadzira Mutsetse, Inokodzera 30-120 zvidimbu kurongedza kwemvura nyoro) I. Performance uye hunhu hwemidziyo. 1. Shandisa renji: 30-120 zvidimbu / bhegi. Macheche emvura akapukuta, maindasitiri akanyorova akapukuta, kicheni nyorova mafuta, vemba nyorova zvipukuta uye zvichingodaro. 2. Kushanda musimboti: (1 roll yezvinhu kudyisa → online slitting → otomatiki kupeta → otomatiki mvura yekuzadza → otomatiki kucheka → otomatiki kuisira → otomatiki kuverenga) → nyoro nyoro akamirira. Kutakura zvinhu | (...
Otomatiki nyoro nyowani kugadzira muchina wekugadzira tambo ye1 zvidimbu kurongedza
Maitiro ekuita uye hunhu hwemidziyo. 1. zvigadzirwa zvekugadzira zvinodiwa: Iyo michina inogona kuburitsa dzakasiyana spunlace; jira remhepo inopisa; bepa risina guruva nezvimwe zvigadzirwa. 2. Iyo inoshanda musimboti yemidziyo: kuendesa → otomatiki longitudinal kupeta → mbishi yekucheka → yakatwasuka kupeta → kurongedza → huwandu hwemvura yekuzadza → kudhinda zuva → kusona → kucheka otomatiki kupera. 3. Midziyo yacho inokodzera kuputira emvura nyoro mu ...
Inokodzera Nespresso, K-makapu, dolce Guesto, Lavazza kofi kapsule etc.
Nespresso kofi capsule yekupurinda muchina
Inokodzera Nespresso, K-makapu, dolce Guesto, Lavazza capsule nezvimwe.
Kofi capsule yekuzadza yekuisa chisimbiso muchina
Kofi capsule yekuzadza muchina wekutengesa
Kofi capsule yekuzadza muchina mutengo
Kofi capsule muchina Nespresso K-makapu dolce Guesto Lavazza
Kofi capsule yekuzadza muchina inogadzira